Clooney, George, George Chukwu, omee
George Clooney(* 6. 1961 May Lexington, Kentucky) bụ American omee, film director, emeputa ihe na screenwriter, nwa nke TV A Nick Clooneho na nwa nwanne na-agụ egwú Rosemary Chukwu na omee Jose Ferrer.
Ọrụ ndị omee mere ka ọ bụrụ atọ Glo Globes. Ọ natara Oscars abụọ - otu maka ọrụ kachasị mma na fim ahụSyrianana nke ọzọ maka ọrụ na-arụpụta (na Affleck na Hesel) ka onye na-eto etoArgo, bụ onye meriri Ahịa Kasị Mma. N'akụkọ akụkọ nke Academy Awards, ọ na-anọchite anya onye na-ese ihe ọbụla a họpụtara na isii dị iche iche.
A maara ya maka ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya. Site na 31. January 2008 site n'April 2014ọ na-eje ozi dị ka onye ọrụ udo nke United Nations.Ihe omuma nke Hercu gụnyere mgbalị iji nweta ihe ngwọta na esemokwu na Darfur, ego iji kwado ndị na-eyi ọha egwu site na 11. Septemba 2001, Oké Osimiri Na-ahụ Maka Mmiri India nke 2004, na ala ọma jijiji nke Haiti 2010, bụ ebe ọ na-ahazi Olileanya maka egwu egwu Haiti. Iji mara banyere nsogbu zuru ụwa ọnụ, o mere ihe ngosiAkwa na Nhụjuanya. Ọ na-agụnyekwa ndị òtù Council on Foreign Relations, American Nonprofit Organizations na eche echiche nke, n'etiti ihe ndị ọzọ, mbipụta a bimonthlyIsi mba.
Magazin TVNduzi TVonye na-eme ihe nkiri na 2005 bụ 1. kama "50 kachasị kpakpando oge niile".Clooney na-egosi na ndepụta nke ndị na-adọrọ adọrọ onwe ugboro ugboro.
A mụrụ ya na 1961 na Lexington, Kentucky, na May.Mama Nina Bruce (onye a mụrụ Warren, nke a mụrụ 1939)bụ eze nwanyị mara mma nke mbụ. Nna Nick Clooney rụrụ ọrụ dịka onye na-eme ihe ngosi telivishọn na American Movie Classics. Mgbọrọgwụ Clooney na-aga Ireland, Germany, England, na ọbụna nna ochie ndị ọzọ dị ndụ bi na Scotland na Netherlands.Nne na nna nna ya, Nicholas Clooney (nke Kilkenny County) na Bridget Byron, kwagara United States si Ireland.Ọgbọ anọ dị n'azụ ahịrị bụ nna nna ya bụ Mary Ann Sparrow, ọkara mmadụ aha ya bụ Nancy Hanks, onye nwa ya bụ onyeisi ndị isi Republican American, Abraham Lincoln.
Clooney kwurịtara Ụlọ Ọrụ White House na President Barack Obama na Darfur, October 2010
Onye nkiri ahụ nwere nwanne nwanyị tọrọ ya bụ Adelia. The na ụmụ nwanne mama na-agụnye-eme ihe nkiri Miguel na Rafael Ferrer, ndị bụ ụmụ ya, ụmụnne m na na-agụ egwú Rosemary Chukwu, na nwanne nna ya, omee Jose Ferrer. Mmekọrịta ya na onye na-abụ abụ bụ Debbie Boone, bụ onye lụrụ nwa nwanne ya nwoke bụ Gabriel Ferrero (nwa José Ferrer na Rosemary Clooney).
Clooney nwetara okwukwe siri ike nke Roman Katọlik.Enye ama aka ufọkn̄wed ke Ufọkn̄wed Ufọkn̄wed Edisana ke Fort Mitchell, Kentucky. Enye ama ada ndusụk ke ini enye ekedide eyenọwọn̄ ke Ohio, emi enye akakade St. Colombia. Ụlọ Akwụkwọ Maịkel, ma n'agbata 1968-1974 na School Western Elementary School na St. Susanna School na Ohio Mason. N'oge nke klas nke asaa, ezinụlọ ahụ laghachiri Kentucky.
George Clooney na January 2012
N'ụlọ akwụkwọ sekọndrị nke Middle School, polio na-agbasa, na-emetụta cheek elu na nke ala nke ihu na ihu n'akụkụ ihu ya. Ngwọta ahụ mere n'ime otu afọ. N'ajụjụ ọnụ maka ederedeOyiyo ubochiApril 2003 kwuru, sị: "Ọ bụ oge kacha njọ ná ndụ m. Ị maara otú ụmụ nwere ike isi bụrụ obi ọjọọ. M ghọrọ scumbag, ma ahụmahụ a ewusiwo m ike".
Mgbe ndị mụrụ ya kwagara Kentucky Augusta, ọ malitere ịmụ akwụkwọ n'Ụlọ Akwụkwọ High School Augusta. Dị ka ihe nkiri ahụ si kwuo, ọ na-agụnye nyocha niile maka ọkwa A ma ọ bụ B.O so n'òtù egwuregwu baseball na ndị basketball. Na 1977, ọ gbalịrị ịbanye n'ime ndị ọkachamara na baseball nke Cincinnati Reds ya na onye ọ na-egwuri egwu ma ha enwetaghị nkwekọrịta. A kwụsịrị nke a na nke mbụ nke egwuregwu.
N'ime afọ 1979-1981, ọ ghọrọ nwa akwụkwọ na Northern Kentucky University, bụ ebe ọ na-amụ ihe dị ka isi okwu nke mgbasa ozi telivishọn. Ọ na-aga obere oge na mahadum nke Cincinnati, ma ọ dịghị nke mahadum mechara.Mgbe ụfọdụ, ọ na-ere ego site n'ire uwe ndị ikom na ịṅụ ụtaba.
1: Nyocha Ụmụaka 3-D: Game Over
2: Olileanya maka Haiti Ugbu a
3: Na nso nke ọ bụla
4: Mgbe ọkụ gụsịrị
5: 72. Onyinye Akara Glo Globe
7: Ụmụ Anụ Anụ (Movie)
8: enyi Danny
9: Ogige ala: Ọchịchịrị gbara ọchịchịrị
10: Nwanna, olee ebe ị nọ?
12: Ọnwụ agaghịkwa achị
13: Ndị nche udo nke UN
15: Mberede (Oghere Usoro)
16: Ides nke March
17: Nnukwu ike (Movie)
20: Ezi abalị na ọdịmma
21: 2002 na ihe nkiri
22: Akwa asatọ
23: Ụlọ Ngosi Ihe Ngosi Ugwu Tussaud
24: Golden Globe maka Best Actress (Comedy / Musical)
26: 1961 na ihe nkiri
27: Ụgwọ nke Cecile B. DeMilla
28: Dabere na Pete
29: The Golden Globe maka Onye Nkwado Na-akwado Nkwado
30: Mbadamba ihe atọ dị ntakịrị n'azụ Ebbing
33: Chuck Israel
36: Golden Globe maka ezigbo nwoke na-eme ihe nkiri (Drama)
37: Ndepụta nke ndị Artists nke Order Art na Akwụkwọ
39: Golden Globe maka Best Screenplay
42: Hụ onye na-egbu gị n'anya
43: onye mmekọ Danny's 2
44: onye mmekọ Danny's 3
45: Onye na-ede akụkọ Hollywood
46: Ụjọ Mr. Lišák
47: 69. Onyinye Akara Glo Globe
48: Batman na Robin
George Chukwu Timoty (* 6. 1961 May Lexington, Kentucky) bụ American omee, film director, emeputa ihe na screenwriter, nwa nke TV A Nick Clooneho na nwa nwanne na-agụ egwú Rosemary Chukwu na omee Jose Ferrer.
Spy Kids 3-D: Game N'ime bụ a n'ihu nke nkiri Spy Kids in Action na 2 Spy Kids: Island nke Lost snů.Tentokrát anaghị anọchi anya a isi ọrụ Carmen ma nwanne ya nwoke Juni Juni.PříběhMladý na-arụ ọrụ aka ya, mata gị n'ụlọnga, ya mere, ọ nwere ike irite a ọhụrụ egwuregwu ntaneti egwuregwu karịa Sylvester Stallone. Ọ naghị achọ ịkpọ OSS maka enyemaka n'ihi na ọ bụ onye na-elekọta ha. N'oge na-adịghị anya onyeisi oche US President George Clooney ga-akpọ ya ma gwa ya na nwanne ya nwoke bụ Carmen apụla. Juni nakweere ọrụ nke ịbanye n'ime ụwa dị ọcha nke egwuregwu ahụ ma bibie ya n'ime awa iri na abụọ. Ọ ghaghị ịgafe ọkwa ise ma họrọ mmesi ike. Ọ na-ahọrọ nna nna ya nke nwere nsogbu na Hacker ma chọọ ịbọ ọbọ, mana Juny amaghị. Na ụzọ mbibi ọ zutere ndị ọhụrụ: Reze, Arnold na Francis, ndị na-eche na ọ bụ nnukwu onye ọkpụkpọ. Juni hụrụ nwa agbọghọ mara mma na Demetrius Arena, nke ọ na-achụrụ maka 3. Na 4. ọkwa Carmen na-aga n'ihu. Ka ọ dịgodị, ndị ọzọ nke OSS choputara eziokwu banyere Hračkáři, ma si otú na-agbalị ibibi ụmụ na gbapụ ha si game n'agbanyeghị na ọ na-akatọ ụwa mbibi. Juni na-enweta 5 site na OSS nsogbu. larịị na ịgbanahụ egwuregwu ahụ. A na-ebibi ya, mana nwoke ahụ gbawara ọsọ gbapụ ụwa gaa na 3D agha. N'agbanyeghi na ndi mmadu nile choro, nna nna ga-eme ya n'onwe ya.
Onye ọ bụla ọzọ (aha mbụ nke August: Osage County) bụ ihe ngosi nkiri nkiri nkiri nke American na tragicomedy nke 2013, dabere na egwuregwu August na-emeri nke ọma: Osage County Pulitzer Prize. Onye na-ede ihe nkiri John Wells so ná ndị na - emepụta ihe gụnyere George Clooney, Jean Doumanian, Grant Heslov, Steve Traxler, Bob Weinstein na Harvey Weinstein. Ntọala bụ 9. September 2013 na Toronto International Film Festival.
Burn After Reading bụ ihe nkiri American nke Ụmụnna Coen si 2008. George Clooney, John Malkovich, Frances McDormand, Tilda Swinton, Richard Jenkins na Brad Pitt gosipụtara ọrụ ndú.
Ọ bụ 11 na-enye onyinye afọ Glo Globe. January 2015 na Beverly Hilton Hotel na Beverly Hills, Los Angeles. Gala nke ugboro atọ bụ nke ndị inyom na-eme egwuregwu na Tina Fey na Amy Poehler kwadoro. Ndi Hollywood Association of Foreign Journalists ekwuputala nhoputa nke 11. December 2014. Miss Golden Globe ghọrọ nwa nke Golden Globe Holder na Frasier Kelsey Gramer Greer Grammer. A na-enweta Cecil B. DeMilla Award for Life Achievement to the Film Industry na onye nduzi, onye na-emepụta ihe, onye na-ede ihe nkiri na onye nkiri George Clooney.
Miguel Ferrer (7. 1955 February Santa Monica, California - 19. 2017 January na Los Angeles) bụ ihe American herec.Život mụrụ dị ka nwa mbụ nke Jose Ferrer na Rosemary Chukwu. Nwanne nwanne ya bụ George Clooney. Ọ tolitere ma mụọ na Beverly Hills. O mere fim mbụ ya, The Man Who Was Not There, wee pụta na Star Trek III: Spider-Man Search (1983). N'afọ ndị na-abịa, o nwetakwuru ọrụ ndị ọzọ, ya mere, ihe nkiri ya ndị a ma ama gụnyere Robocop, 1984 Hot Shots na okporo ụzọ - ọchịchị ndị ọchịchị.
Ụmụ anụmanụ na-ahụ maka ehihie (Animal Nocturnal) bụ onye na-eme egwuregwu uche nke American site na 2016. Tom Na-eduzi Tom Ford. Ihe nkiri a sitere n'ike akwukwo dee Austin Wright Tony na Susan. Isi ọrụ egwuri site Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Isla Fisher, Armie Hammer, Laura Linney, Andrea Riseborough na Michael sheen.
Enyi Danny (aha mbụ Ocean's Eleven) bụ ihe nkiri American si 2001. Ọ bụ mmeghachi nke Danny si iri na otu site na 1960. Onye nduzi Steven Soderbergh bụ George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle, Andy Garcia na Julia Roberts. Ihe nkiri ahụ bụ nnukwu ihe ịga nke ọma ọ bụghị nanị na ego ma kamakwa. Steven Soderbergh na-eduzi ihe nkiri abụọ, ihe nkiri nke 2 onye mmekọ Danny's 2004 na Danny's 3 na 2007.
Suburbicon: Dark Suburbs (English Suburbicon) bụ American Crime Comedy nkiri si 2017. George Clooney na-eduzi ya, na-adabere na ọnọdụ dị iche iche ebe ụmụnna Coen na Grant Haslov nyekwara aka. Matt Damon, Julianne Moore na Oscar Isaac nọ na-atụ ụda.
Nwanna, olee ebe ị nọ? (English About Brother, Where Art You?, 2000) bụ ihe nkiri mpụ American nke 2001. Nke a bụ akụkụ ọzọ site na ọrụ ndị a ma ama bụ Joel Coen na Ethan Coen. Ihe nkiri a dabeere na akụkọ banyere odide Greek oge ochie nke Odyssey nke onye na-ede uri Greek bụ Homer. Ọ kọrọ akụkọ banyere ndị atọ mara ikpe (Everett, Pete na Delmar), onye, ​​mgbe gbanahụrụ n'ụlọ mkpọrọ, na-aga ebe otu onye n'ime ha (Everett, n'Ịntanet George Chukwu) tupu mkpọrọ lie akụ. Na film, na a metaphorical uche choputara ọtụtụ odide sitere n'ike mmụọ nsọ site n'oge ochie poems, ma ọ bụghị mythical n'oge Ancient Greece, ma American Southwest Mississippi n'oge aku nsogbu 30. afọ.
E mere Oscars na Kodak Theatre na Los Angeles 25. February 2007. Nguru a malitere na oge 5.30 oge na n'ime awa ole na ole Ụlọ akwụkwọ nke Motion Picture Arts and Sciences nyere akara na ụdị 24. Onye na-enye onyinye bụ Ellen DeGeneres, onye e nyere ohere a maka oge mbụ. Ihe ngosi kachasị mma bụ Martin Scorsese Cidese Identity, ngụkọta nke onyinye anọ. N'ụzọ megidere nke ahụ, ndị kachasị aha bụ ndị Dreamgirls - ọnụ ọgụgụ asatọ. A na-emeri ọtụtụ nnochite anya Bebel.
"Ọnwụ agaghịkwa achị achị" bụ abụ uri nke onye na-ede uri Welsh, Dylan Thomas. Aha uri ahu sitere na akwukwo nye ndi Rom, nke bu akuku nke agba ohu. Nke mbụ pụtara na 1933 na mbipụta May nke New English Weekly. Na Septemba 1936 wepụtara uri na nchịkọta iri abụọ na ise. Onye na-eme ihe nkiri George Clooney na-akpọ akụkụ nke uri na vidio Solaris na 2002. Onye na-egwu egwú na onye na-ede egwú John Cale na-ede uri a na 2016 mgbe ọ na-egwu egwu na Cardiff, Michael Sheen gụrụ ya.
UN ozi nke Peace (English United Nations ozi nke Peace) bụ a aha ọdịda site na United Nations "pụtara ìhè ndị mmadụ, jiri nlezianya họrọ si n'ubi ndị art, music, akwụkwọ na egwuregwu ndị kwetara inyere anya mmasị ụwa dum na-arụ ọrụ nke United Nations".
Ave, Siza! (Original English Ekele, Caesar!) Nke a British-American ntochi film nke afọ 2016, onye dere, sị, na-emepụta, na gwara nākpacha aji Coenové.Ve Brothers, starring Josh Brolin, George Chukwu, Alden Ehrenreich, Ralph Fiennes, Jonah Hill, Scarlett Johansson , Frances McDormand, Tilda Swinton, na Channing Tatum. The film bụ a chepụtara echepụta akụkọ na-aghọ onye dị adị, nakwa na Eddie Mannix, na-arụ ọrụ na Hollywood film ụlọ ọrụ na fifties na-agbalị imezi a ọnọdụ ebe isi omee okụrede n'oge filming.
Mberede (English ER) bụ usoro mgbasa ozi dị egwu nke America nke onye edemede, onye na-ede akwụkwọ akụkọ na onye na-ahụ maka telivishọn bụ Michael Crichton dere. Maka oge mbụ 19 pụtara n'ihu igwe. September 1994 na telivishọn NBC. Akụkọ a na-emekarị na ngalaba mberede nke ụlọ ọgwụ ahụike na Cook County, Chicago. Usoro a bu Constant c Productions na Amblin Entertainment na mmekota na Warner Bro. Television Production, Inc.
Ides of March na The Ides of March nwere ike ịbụ: na Ides of March (English Ides of March) - A ụbọchị na Roman kalenda kwekọrọ ekwekọ 15. březnuDen orure (na English mbụ The Ides of March) - The film, nke e eduzi George Chukwu (2011) Ides of March (akwụkwọ) (na Bekee mbụ The Ides of March) - a akwụkwọ site American dere Thornton Wilder (1948) The Ides of March ( otu) - American òtù egwú "Ides of March" - na song egwú John Cale na Terry Riley agbala na ha album Church of anthrax (1971) "The Ides of March" - song nke English music gbalaga Iron Nwata nwaanyị wepụtara na ya album Killers (1981)
Nnukwu ike (Gravity English) bụ ihe nkiri sayensị ndị America na-eme ihe nkiri nke Alfonso Cuaron nke 2013 na-eduzi. Ọrụ dị mkpa nke ndị na-agba ndụ na-agba ndụ na ndị na-agba ndụ na ndị na-agbapụ n'ụgbọelu bụ Sandra Bullock na George Clooney.
Charles Jerome "Jerry" Weintraub (26. 1937 September, Brooklyn, New York - 6. 2015 July, Santa Barbara, California) bụ ihe American omenala njikwa, egwu ume, film na telivishọn na-emeputa. Ọ bụkwa onyeisi oche nke United Artists.
Cheryl Ann Fernandez-Versini (* 30. 1983 June Newcastle n'elu Tyne, England, nee Tweedy mesịrị Cole) bụ English na-agụ egwú na so na British girl otu Girls agụpụta. A mụrụ ya nke anọ n'ime ndị ụmụnne ise (o nwere ụmụnne nwoke na nwanne nwanyị atọ). Ọ bụ otu n'ime ndị jurors British X-Factor. O nwere kpakpando bọọlụ Ashley Cola, gbara alụkwaghịm na 2010. Ọ lụrụ 7 ọzọ. July 2014 maka onye France bụ Jean-Bernard Fernandez-Versini. Ihe ukwu ya bụ Parachute, Na-alụ maka ịhụnanya a, Kpọọ Aha m ma ọ bụ Nkwa Nke a
Ezigbo abalị na ezigbo ọdịda (ezigbo abalị, ọdịda ọma) bụ ihe nkiri American na-acha ọcha na nke ọcha site n'aka onye nlekọta George Clooney nke 2005. Ọ dabeere na ihe ndị mere eme ma na-emekọ ihe banyere ọnọdụ telivishọn CBS na 50. afọ 20. na narị afọ, oge a na-akpọ. McCarthyism, ie. na a oge nke ike mgbochi ọchịchị Kọmunist, nke ọtụtụ ndị America na-prosecuted maka ihe ma ọ bụ obere eziokwu ebubo mmekota na Soviet Union na / ma ọ bụ ndị Communist Party USA. Karịsịa, ọ na-akọ akụkọ banyere odeakụkọ na-achọ nchọpụta Lee It Now na ndị okike ya, Edward Roscoe Murrow, Fred Friendly na Joseph Wershby. Aha nke ihe nkiri a sitere n'ike okwu nke okwu ahuru Edward R. Murrow na-eme ugboro ugboro na njedebe nke ihe ngosi - "Ezigbo mma, na ihe di nma", nke putara "Goodnight and Good Luck" na Czech. The film e nominated maka isii Oscars, gụnyere maka kacha mma film Oscar, ma ọ bụghị na-enweta abụghị otu, ma e-asọpụrụ ndị American Film Institute dị ka otu nke iri mma na fim nke afọ, nakwa dị ka Stanley Kramer Award.
Movies of movies 2002České Maka ozi ọzọ, hụ ndepụta Czech fim # 2002.ABCDTOPOL (eduzi Filip Remunda) Angel Face (eduzi Zdeněk Troška) Brak (eduzi Karel Spěváček) Fimfárum Jan Werich (eduzi Vlasta Pospíšilová na Aurel Klimt) Jan 69 (eduzi Stanislav Milota) Bride na nnukwu ụkwụ (eduzi Viktor Polesný) obodo B (eduzi Filip Remunda) Year nke ekwensu (eduzi Petr Zelenka) brats (eduzi Zdeněk Tyc) Njem (gwara site Alice Nellis) Foreign filmy8 inyom (eduzi François Ozon) mmegharị (eduzi Spike Jonze) The Bourne Identity (eduzi Doug Liman) Asterix na Obelix: Mission Cleopatra (eduzi Alain Chabat) Balto 2: The wolf si n'ụzọ (eduzi Phil Weinstein), Red dragon (director Brett Ratner) Long ụzọ (film) (director: Adam Shankman) Die ọzọ Day (gwara site Lee Tamahori) ice Age (gwara site Chris nkpirikpi na Carlos Saldanha) ịha (eduzi Kurt Wimmer) Femme Fatale (eduzi Brian De Palma) Frida (nke Julie Taymor dere site na ya) York (gwara site Martin Scorsese) Harry Potter na Chamber of Nzuzo (gwara site Chris Columbus) Hart si War (eduzi Gregory Hoblit) Elekere (eduzi Stephen Daldry) dike (Director: Zhang Yimou), Chicago (eduzi Rob Marshall) enwetaghị m ma ọ bụrụ na Ị Pụrụ (gwara site Steven Spielberg) Interstate 60 (eduzi Bob Gale) K-19: The Widowmaker (eduzi Kathryn Bigelow) Cat fere fere (eduzi Hirujoki Morita) Windtalkers (gwara site John Woo) The akpị King (eduzi Chuck Russell), gburugburu (eduzi Gore Verbinski) ọbara Sunday (gwara site Paul Greengrass) Lilja (eduzi Lukas Moodysson) Nkwupụta nke a Ize Ndụ Mind (eduzi George Chukwu) Minority Report (gwara site Steven Spielberg) Kọọrọ ya (director Pedro Almodóvar) My Big abụba Greek agbamakwụkwọ (eduzi Joel Zwick) Snapshots (eduzi Rudolf van den Berg) Man enweghị a gara aga (eduzi Aki Kaurismäki) Men na nwa 2 (gwara site Barry Sonnenfeld) Naqoyqatsi (eduzi Godfrey Reggio) O Schmidt (gwara site Alexander Payne) Magdalini ndị nwanyị (gwara site Peter Mullan) Jehova nke Mgbaaka: Ụlọ elu abụọ (director Peter Jackson) pianist (eduzi Roman Polanski) sweetest Ihe (gwara site Roger Kumble) Python 2 (director: Lee McConnell) oke bekee-Gosiri ngere (Director: Phillip Noyce) Rabbits (gwara site David Lynch) Obibi Ya Ọjọọ (duziri site na: Paul WS Anderson) Bịa! (Duziri site Charles Stone III) Secretary (gwara site Steven Shainberg) Ududo-Man (eduzi Sam Raimi)
Oké Osimiri 8 bụ ihe nkiri American nkiri na-abịa. Onye nlezi fim bụ Gary Ross. Ihe nkiri ahụ bụ ihe ntanye nke ụmụ nwanyị Danny nwanyi, nke Sandra Bullock duziri. Ha na-akpọ Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Rihanna, Mindy Kaling na Awkwafina raffle. E setịpụrụ ụbọchị mbụ na 8. June 2018.
Museum Museum nke Tussaud bụ ụlọ ọrụ ngosi ihe ochie nke ụwa, nke dabeere na London, nwere alaka na Amsterdam, Hong Kong, Las Vegas na New York na Vienna. Ọ bụ Marie Tussaud guzobere ya, bụ onye na-eme ihe na-eme ka ndị na-emepụta kịtịkpa.
Golden Globe maka kacha mma omee ke a ntochi ma ọ bụ egwú ọdịda mgbe nile ebe ọ bụ na 1951 Hollywood Foreign Press Association (Eng. Hollywood Foreign Press Association HFPA acronym) at ememe Golden Globes.
Jocelyn Quivrin (14. 1979 February, Dijon, France - 15. 2009 November, Saint-Cloud, France) bụ a French herec.Dětství na studiumNarodil na Dijon, n'ime ezinụlọ nke akwa dibịa. Ọ na-amụ ihe nkiri na Hector Berlioz School na Vincennes wee gụchaa akwụkwọ na akwụkwọ na Nanterre School. Ruo ọtụtụ afọ, ọ nọwo na-arụ ọrụ na arụ ọrụ ihe nkiri ma na-aga n'ihu na-eme ihe nkiri nkiri.
UdálostiArthur Miller na Marilyn Monroe rozvedli.Odpůrci film nnyocha na US nwetara a ujo mgbe Ụlọikpe Kasị Elu kpebiri na nnwere onwe nke okwu anaghị emegide, ma ọ bụrụ na ha na-osụk fim cenzurnímu úřaduPrudce adalata ọnụ ọgụgụ nke-enyochakwa fim, tumadi n'ihi na ọha na eze na ntụle nke gara aga na-taboo on intenzitě.Wall Street Journal bipụtara a ndepụta nke mba na kasị voluminous mmepụta ke 60. afọ. The isi jstálo Japan (400 okpokolo agba kwa afọ) na India (360 okpokolo agba kwa afọ). N'etiti ha bụ Turkey, Gris na Ijipt, bụ ndị, dị ka India, mere ka ihe nkiri dị ka ahịa maka ụlọ ha. Na mba ndị a ma ama na fim, USA, Ịtali na France, ihe gbara ọkpụrụkpụ 150 gbara kwa afọ.
Golden Globe Cecil B. DeMille Award (English Cecil B. DeMille Award) bụ ọdịda na Golden Globes ememe ọ bụla afọ Hollywood Foreign Press Association (bekee The Hollywood Foreign Press Association, afo HFPA) maka ndụ ihe nweta na film. Ọ nọ na-aha ya bụ mgbe ndị American emeputa ihe na director Cecil B. DeMille (1881 - 1959), bụ ndị na-ghọrọ ndị mbụ njide.
Lean na Pete bụ ihe ngosi nkiri nkiri British site na 2017, nke director director Andrew Haigh kwuru. Ihe edemede, akwụkwọ Willy Vlautin dere otu aha ahụ, bụkwa ọrụ Haigh. Charlie Thompson kpakpando na Charlie Plummer. Ọrụ ndị ọzọ gụnyere Chloë Sevigny, Travis Fimmel na Steve Buscemi.
Golden Globe Award maka Best-eme ihe nkiri na a na-akwado Ọrụ ọdịda maka oge mbụ na January 1944 Hollywood Foreign Press Association (Eng. Hollywood Foreign Press Association HFPA acronym) at ememe Golden Globes.
Atọ atọ dị n'azụ Ebbing (na Bekee mbụ Mbadamba Ụkpụrụ Atọ n'èzí Ebbing, Missouri) bụ ihe nkiri American nkiri na 2017. Martin McDonagh duziri. Ọrụ mbu bụ Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, John Hawkes na Peter Dinklage. A na-ekiri ihe nkiri ahụ na Venice Film Festival na Toronto International Film Festival, bụ ebe ọ meriri onyinye ndị na-ege ntị. Edepụtara 10 na cinemas. November 2017. Na Czech Republic ga-amalite 15. February 2018.
John Burke Krasinski (* 20. 1979 October, Newton, Massachusetts, USA) bụ American omee, director na screenwriter. Ọ pụtara n'ihu eg. Na fim License aka òtù ezinụlọ, ọ gbagwojuru anya, si, Wepu Anyị Gaa, gbazinyere ya olu uma nke Lancelot na film Shrek atọ, ma nke kasị ewu ewu na-akwụ ya ọrụ nke Jim Halpert ke nsonso ụlọ ọrụ.
Ememme ememme 82. E nyere ndị Oscars 7. March 2010. Ihe nkiri ahụ Ọnwụ bụ ihe nkiri kasị mma n'ebe niile nke meriri ngwongwo ọlaedo nke 6. Ihe ngosi kachasị mma bụ "Ọnwụ" na "Avatar" (9).
Ụmụ Izrel Chuck (* 10 August 1936) bụ onye American Jazz bass player. A mụrụ ya na New York City na ezinụlọ egwú. Ebe ọ bụ na 1959 anọwo na sextet George Russell. N'afọ 1961 ruo 1966, ọ rụrụ ma dekọọ dị ka otu onye na-egwu pianist Bill Evans. Mgbe e mesịrị, ya na ọtụtụ ndị egwú ndị ọzọ gụnyere ya gụnyere Rosemary Clooney, Herbie Hancock, Judy Collins, na Patti Austin. Na 1997 ọ na-edekọ album ahụ na ndị egwú egwú egwú Dutch Metropole Orkest.
Andrew Steven Soderbergh (* 14. 1963 January Atlanta, Georgia) bụ American film director, cinematographer, screenwriter, nchịkọta akụkọ, na-emeputa, na (karịsịa ya fim) bụkwa ihe ụfọdụ omee. Ọ dị elu 1,83 m.
Rai 3 bụ nke atọ omume nke Italian ọha telivishọn Rai.CharakteristikaRai 3 e mere karịsịa achọ ekiri na-agbasa ozi tumadi ugbua omume, okwu na-egosi, egwuregwu (nwetụ na Rai Sport), eke akụkọ ihe mere eme akụkọ na fim maka a-achọ na-ege ntị. Ihe nkiri vidio Hollywood, ihe egwuregwu, egwuregwu ma ọ bụ ihe ngosi eziokwu na-agbasa naanị na ọ bụghị naanị. Ihe omume a na-etinye aka na nkwalite ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Ịtali na ụwa. A na-agbasa mgbasa ozi site na satellite Satellite.
Onyinye Golden Globe maka Best Actor na Drama na-enye onyinye site na Hollywood Foreign Press Association (HFPA) na Golden Globes ememe. A na-akpọ òtù mbụ kachasị na-akpọ Best Actor ma nye ya kemgbe 1943. Na 1950, iwu gbanwere ma otu abụọ abụrụ - Onye kachasị ihe nkiri na Drama na Onye Nkụzi kachasị na Comedy / Musical.
Na-ezughị ezu ndepụta ejiri nke na Order of Arts na Literature French republikyČeští wee nke Commandeur des Arts et LettresVáclav Havel - ede egwuregwu na onye bụbu president nke Czechoslovakia na Czech Republic (2001) Officier des Arts et LettresBohumil Hrabal - spisovatelChevalier des Arts et LettresAdolf Ịmụ - Czech ese na grafikVáclav Boštík - Czech malířPetr Eben - Czech dere na varhaníkAnna Fárová - Czech-French art ọkọ akụkọ ihe mere na překladatelkaHana Hegerová - Czech omee na šansoniérkaMagdalena Akpụkpọ anụ - Czech opera pěvkyněRadoslav Kvapil - Czech klavíristaJiří Menzel - Czech film na nkiri režisérJan Saudek - Czech fotografBořek Sipek - Czech-atụpụta ụkpụrụ ụlọ na designérJan Vladislav - Czech ede uri na překladatelEva Zaoralová - Czech film publicistkaZahraniční wee nke Commandeur des Arts et LettresDirk Bogarde - English omee (1990) Bono - edu ndú na-agụ egwú nke Irish Skupi nj U2 (2013) David Bowie - English na-agụ egwú na songwriter (1999) Ray Bradbury - American dere (2007) Sean Connery - Scottish omee (1987) Bob Dylan - American na-agụ egwú (1990) Clint Eastwood - American omee (1994) Audrey Hepburn - British omee na nnọchiteanya nke UNICEF (1987) Jean-Marie Klinkenberg - Onye Belgium ọkà mmụta asụsụ semiotician (2010) Emir Kusturica - Serbian film director (2007) Roger Moore - British omee (2008) Joaquin Rodrigo - Spanish dere (1998) Ringo Starr - English musician a so beatles (2013) Meryl Streep - American omee (2003) Donald Sutherland - Canada omee (2012) Bruce Willis - American omee (2013) Officier des Arts et LettresTim Burton - American director, screenwriter na onye dere (2010) Elton John - English na-agụ egwú, dere na pianist (1993) Danielle Steel - American dere (2002) Chevalier des Arts et LettresGeorge Chukwu - Onye Ga American omee (2007) Paulo Coelho o - Brazil so dee (1999) Patrick Demarchelier - echebe (2007) Viera Ďuricová - Slovak film nsụgharị (2015) Julia Kristeva - Franco-Bulgarian edemede (1987) Jude Iwu - British omee (2007) Ester Martinčeková-Šimerová - Slovak na-ese na scenographer (2001) Sherrill Milnes - American baritone (1996) Kylie Minogue - Australian na-agụ egwú (2008) Peter Molyneux - British mmebe nke egwuregwu kọmputa (2007)
John Pizzarelli (* 6 April 1960) bụ onye American Jazz guitarist. Nna ya bụ Bucky Pizzarelli bụkwa onye na-agụ jazz na nwa nwanne ya nwoke, Martin Pizzarelli, onye ọkpụkpọ jazz bass. Mgbe ọ na-arụ ọrụ, nke ọ malitere na mmalite afọ 1980, o nyere gị ọtụtụ n'ime ọba ya na ọtụtụ nna na ndekọ ya. N'oge ọrụ ya, ya na ndị egwú ndị ọzọ gụnyere George Shearing, Jessica Molaskey, Ray Brown, Buddy DeFranco, Rosemary Clooney na James Taylor. 2012 bipụtara ihe odide ya nke a kpọrọ World na String: A Mususe Memoir.
The Golden Globe Award maka Best Screenplay bụ otu n'ime Golden Globe Awards nyere kwa afọ site na Hollywood Foreign Press Association (HFPA). Onye mbụ meriri nke a bụ George Seaton, onye meriri ya na 1948 maka fim maka Miracle na New York film.
Emal Chukwu, nwa agbọghọ Alamuddin (* 3. 1978 February Beirut) bụ a British ọkàiwu, mmume na onye dere, bụ nke sitere Libanonu.V iwu omume ọkachamara mba na mba iwu, mpụ iwu, ruuru mmadụ na extradition. Na-anọchi anya ndị ọzọ, nchoputa nke WikiLeaks Julian Assange ma ọ bụ ndị nke mbụ Ukrainian Prime Minister Yulia Tymoshenko.
Jan Kanyza (* 25. 1947 October Lipník) bụ a Czech film na telivishọn herec.Život Na 1966 gụsịrị akwụkwọ ụtọ asụsụ akwụkwọ Hejčín, na 1970 ọ malitere a gụsịrị akwụkwọ na Prague Academy nke Ịrụ Arts. Ọ mụrụ n'okpuru nduzi nke Prọfesọ Milos Nedbala.Mimo eme a raara nye sere, nke bụ oké ahuhu. O gosipụtwara ihe osise ya na USA, Germany, France na Sweden. Ọ bụ onye edemede na onye na-akọwa ihe dị iche iche maka ụmụaka. Enweghị ihe a maara nke ọma na ihe omume ntụrụndụ ọzọ bụ foto, nke ọ na-ewere dịka ọrụ mmemme ọzọ.
"Nkwupụta nke Mkpụrụ Obi Ọjọọ" bụ ihe nkiri biopic na-enyo enyo na mmekọ-emepụta nke 2002 American-British-German. Charlie Kaufman kwuru ihe mere e ji dee akwụkwọ ahụ, George Clooney dekwara ihe mbụ ọ na-eme.
Danny's 2 (American Ocean's Twelve) bụ ihe nkiri mpụ American nke 2004. Onye nhazi fim ahụ bụ Steven Soderbergh. George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Bernie Mac, na Elliott Gould nwere ihe nkiri ahụ.
Danny's 3 (iri na atọ nke Ocean) bụ ihe nkiri nkiri nkiri American si 2007. Onye nhazi fim ahụ bụ Steven Soderbergh. George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Bernie Mac, na Elliott Gould nwere ihe nkiri ahụ. Nke a bụ nke abụọ nke Danny band.
The Fantastic Mr. Fox bụ ihe nkiri animated American site na 2009. Onye na-ahụ maka fim bụ Wes Anderson. George Clooney, Meryl Streep, Jason Schwartzman, Bill Murray na Willem Dafoe dara na fim ahụ.
Ọ bụ 15 na-enye onyinye afọ Glo Globe. January 2012 na Beverly Hilton Hotel na Beverly Hills, Los Angeles. Egwurugwu Britain na omee egwu Ricky Gervais nyere onye gala ahụ nke ugboro atọ. Ndi Hollywood Association of Foreign Journalists ekwuputala nhoputa nke 15. December 2011.
Batman na Robin (Bekee na Batman & Robin) bụ ihe nkiri American mere na 1997, nke Joel Schumacher gbara site na akụkọ akụkọ banyere Batman. George Clooney, onye na-anọchite anya Vall Kilmer na Michael Keaton, bụ onye na-akpọ Batman na fim ndị dị na mbụ. Na cinemas US, otu ihe nkiri nke 125 nke nde dollar, nke 20 gosipụtara. June 1997, na-ewere 238 207 122 dollar n'ụwa niile. Nke a bụ ihe nke anọ na nke ikpeazụ nke usoro 80 nke ihe nkiri Batman. na 90. ụgbọ elu 20. narị afọ.
Michael Clayton bụ American ịrịba ama film si director Tony Gilroy 2007 starring George Chukwu, Tom Wilkinson, Tilda Swinton na Sydney Pollack. The film ndị a na-ekpe ikpe ọkàiwu Michael Clayton kolegovým ịnagide a mberede echiche ida, na nrụrụ aka na aghụghọ banyere nnukwu ahịa nke ya iwu ike, ụlọ ọrụ, nke na-gbara akwụkwọ a na klas edinam n'ihi na nke mmetụta nke na-egbu egbu agrochemicals.